Canada oo ka hadashay sida loo maamulo dhaqaalaha ay siiso Soomaaliya | Radio Gaalkacyo 88.2 FM
Canada oo ka hadashay sida loo maamulo dhaqaalaha ay siiso Soomaaliya
Wasiirka Socdaalka dalka Canada Axmed Xuseen oo ah nin Soomaali ah ayaa waxa uu sheegay in lacago fara badan sanad kasta Canada ay ugu deeqdo Soomaaliya.
Wuxuu sheegay lacagahaasi inay ku kalsoon yihiin sida loo maamulo, wuxuu tilmaamay shirkii ka dhacay Brussels inay xoojiyeen dhaqaalaha ay ugu deeqeen Soomaaliya.
Wasiir Axmed Xuseen ayaa sheegay in Canada ay shirkaasi ka aheyd korjoogto islamarkaana ay indha indheyneysay dhaqaalaha Soomaaliya ay ugu deeqayeen wadamada reer Yurub iyo lacagahaasi meelaha loo qorsheeyay inay ku baxaan.
Sidoo kale wuxuu sheegay in Canada aysan waxba ka bedeli doonin dhaqaalaha iyo taageerada ay siiso Soomaaliya, maadaama dowladda Soomaaliya ay taageero u muujisay Sacuudiga oo khilaaf uu kala dhaxeeyo Canada.
Dowladda Canada ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha dhaqaalaha badan siiya Soomaaliya, sanad kasta, kuwaasi oo loogu tala galay in wax looga qabto arrimaha abaaraha iyo xaaladaha kale ee ka jira Soomaaliya.